BUS ကားပျေါမှာ တို့ဆေးမိပွီး ကံကောငျးလို့ လှတျလာတဲ့ ကြောငျးသားလေး... - MM Live News
“ဒီနေ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးရေးပြပါရစေ….ကလေးစာပေပွဲတော်သွား ပြန်လာပြီးအိမ်မှာခဏနား ပြီးမီးပူတိုက်နေချိန်မှာဘဲလ်သံကြားလို့ဖွင့်ကြည့်တော့ညီမရဲ့သားTTCမှာကျောင်းတက်တဲ့တူလေးဖြစ်နေတယ် သူကရှစ်တန်းပေါ့…သားရေဘာဖြစ်လို့အိမ်မပြန်လဲမေးတော့ သားခေါင်းအရမ်းမူးပြီးမဟန်နိုင်တော့လို့ကားပေါ်ကအမြန်ဆင်းခဲ့တာ…..
သူကခါတိုင်းလည်းလိုင်းကားစီးပြီးပြန်နေကျ သူ့အမေကမှတ်တိုင်မှာစောင့်ကြိုတာအသွားမှာတော့အဖေကဝင်ပို့တာလေ…ကျောင်းကအပြန်ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်ရောက်တော့မိန်းမတစ်ယောက်အနားကပ်လာပြီးလက်မောင်းမှာစူးကနဲဖြစ်သွားတယ် မကြာဘူးသားလည်းနဲနဲမူးလာတယ်….
ဒါနဲ့မေမေကြိုနေတဲ့မှတ်တိုင်ရောက်အောင်မသွားနိုင်တော့ ကြီးကြီးအိမ်မှာဆင်းလိုက်တာတဲ့လေ ….ကျမလည်းသူ့ကိုမေးတော့ အဲဒီမိန်းမလည်းသူဆင်းတော့လိုက်ဆင်းလာတယ် …. သူလည်းအပြေးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တာ လို့ပြောအပြီးမေ့လဲသွားပါတယ်…
Writer ; Kwee (Jeeptoolay) / Source ; Daw Moe Moe Thet
“ဒီနကေို့ယျတှဖွေ့ဈရပျလေးရေးပွပါရစေ….ကလေးစာပပှေဲတျောသှား ပွနျလာပွီးအိမျမှာခဏနား ပွီးမီးပူတိုကျနခြေိနျမှာဘဲလျသံကွားလို့ဖှငျ့ကွညျ့တော့ညီမရဲ့သားTTCမှာကြောငျးတကျတဲ့တူလေးဖွဈနတေယျ သူကရှဈတနျးပေါ့…သားရဘောဖွဈလို့အိမျမပွနျလဲမေးတော့ သားခေါငျးအရမျးမူးပွီးမဟနျနိုငျတော့လို့ကားပျေါကအမွနျဆငျးခဲ့တာ…..
သူကခါတိုငျးလညျးလိုငျးကားစီးပွီးပွနျနကြေ သူ့အမကေမှတျတိုငျမှာစောငျ့ကွိုတာအသှားမှာတော့အဖကေဝငျပို့တာလေ…ကြောငျးကအပွနျဆငျရတှေငျးမှတျတိုငျရောကျတော့မိနျးမတဈယောကျအနားကပျလာပွီးလကျမောငျးမှာစူးကနဲဖွဈသှားတယျ မကွာဘူးသားလညျးနဲနဲမူးလာတယျ….
ဒါနဲ့မမေကွေိုနတေဲ့မှတျတိုငျရောကျအောငျမသှားနိုငျတော့ ကွီးကွီးအိမျမှာဆငျးလိုကျတာတဲ့လေ ….ကမြလညျးသူ့ကိုမေးတော့ အဲဒီမိနျးမလညျးသူဆငျးတော့လိုကျဆငျးလာတယျ …. သူလညျးအပွေးအိမျပျေါတကျခဲ့တာ လို့ပွောအပွီးမလေဲ့သှားပါတယျ…
November 20, 2019 MM Live